नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको भन्दा निको भएर घर फर्किनेको संख्या अपत्यारिलो तरिकाले बढ्यो – Online Sunapati
आज २०७७ मंसिर १९ गते शुक्रबारको राशिफल
खु:शीको खबर : केही हप्तामा नै कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाइने
यिनै हुन स्वता खड्काका कान्छा श्रिमान ! बिहेको तयारी भब्य हुदै
दुबईमा कामदारको रुपमा पुगेकाले जिते ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको चिठ्ठा, घोषणा क्षणमा बेहोस भए
खाली पेटमा लसुन खाँदा मिल्छन् यस्ता १० फाइदा !
यी हुन् केपी ओलीले आफूपछि बनाउन चाहेका प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, प्रचण्ड मान्लान् ?
यस्तो बन्यो श्वेता खड्काको विवाहको कार्ड
कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? यस्तो छ रहस्य !
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको भन्दा निको भएर घर फर्किनेको संख्या अपत्यारिलो तरिकाले बढ्यो
नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको भन्दा निको भएर घर फर्किनेको संख्या अपत्यारिलो तरिकाले बढ्यो
काठमाडौं, असार २९- नेपालमा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका कुल सङ्क्रमितभन्दा कोरोनाभाइरसबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या पहिलोपटक बढेको छ । आइतबारसम्म आठ हजार ५८९ जना सङ्क्रमित निको भई घर फर्केका छन् । नेपालमा कोभिड–१९९सार्स–कोभ–२० का कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ हजार ८०१ छन् । शनिबार ५०।५ प्रतिशत रहेको निको हुने दर आइतबार ५१।१ प्रतिशत पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सक्रिय रहेका सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ हजार १७४ रहेको जनाएको छ । यसरी पहिलो पटक सङ्क्रमण सक्रिय रहेको सङ्क्रमितभन्दा निको हुने बढेका छन् ।
असार तेस्रो साता दैनिक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी भएको थियो । करिब एक सातासम्म पाँच सयभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिँदा प्रकोपको रुप लिई कोरोना सङ्क्रमण महामारीको रुप लिन सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर असार १९ पछि दैनिक रुपमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छन् ।
नेपालमा विश्व परिदृश्य अनुसार सक्रिय सङ्क्रमित र निको हुने दर कम नै छ । सङ्क्रमित हुने सङ्ख्याको आधारमा नेपाल ६१ औँ सबैभन्दा प्रभावित राष्ट्र हो । विश्वभरि कुल सङक्रमित एक करोड २१ लाख ९० हजार १९६ छन् । करिब ४५ लाखमा सङ्क्रमण सक्रिय छन् । मन्त्रालयका अनुसार विश्वभरि हाल कोरोना सङक्रमण सक्रिय सङ्क्रमित सरदर ३७।३ प्रतिशत मात्रै छ । नेपालमा भने सङ्क्रमण सक्रिय रहेको सङ्क्रमित ४८।९ प्रतिशत छ । विश्वमा निको हुने दर करिब ५८ प्रतिशत छ । नेपालमा ५१।१ प्रतिशत छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार असार पहिलो साता नेपालमा सङ्क्रमण दर ११ प्रतिशत कायमे थियो । असार १९ गते उक्त दर १७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । हाल सङ्क्रमण दर २ प्रतिशतमा झरेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार ९१६ जनाको नमुना परीक्षणको प्रतिवेदन आएकोमा ८२ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । जुन पछिल्लो दुई सातामा शनिबारको ७० जना सङ्क्रमितपछिको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम हो ।
महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र९इसीडीसी०का प्रमुख डा। वासुदेव पाण्डेका अनुसार निको हुने दर बढिरहँदा विश्वको तथ्याङ्क भेट्न एक साता लाग्छ । तर क्वारेन्टाइनमा रहेकाले उक्त दरलाई प्रभावित बनाउन सक्छन् । क्वारेन्टाइनमा हाल २३ हजार ७८४ जना छन् । जसको परीक्षण गरिएको छैन । क्वारेन्टाइनको रहेकाहरूको परीक्षण नतिजाले नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढन सक्ने डा। पाण्डे बताउँछन् ।
तर पछिल्ला दिनहरूका क्वारेन्टाइनमा बसेका सङ्क्रमितमा पनि सङ्क्रमण दर थोरै देखिएको छ । जसले नेपालका लागि कोरोनाको सङ्क्रमण दरले राहत दिएको छ ।पत्यकामा ३४७ सङ्क्रमितगत जेठ महिनासम्म न्यून सङ्क्रमित फेला पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक रुपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ । जसमध्ये अधिकांश विदेश तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन् । तर सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएर सङ्क्रमण हुनेहरू पनि बढी छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा उपत्यकामा फेला पर्ने सङ्क्रमित अस्पतालमा भर्ना भएका, विमानस्थल भएर आएका र केही कुनै यात्रा वृत्तान्त नरहेका पनि छन् ।
तर उपत्यकामा सङक्रमण दर बाहिरको तुलनामा थोरै पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सङक्रमण दर शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत छ । बाहिर छ प्रतिशत रहेको छ । उपत्यकाबाहिर महिला सङ्क्रमित करिब दश प्रतिशतको हाराहारीमा रही घटबढ हुँदै आएको छ । तर काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । डा। पाण्डेले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।
डा। पाण्डेले अनुसार २५ गतेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको १२ स्थानबाट तीन हजार नमूना सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल पाँच हजार नमूना लिने लक्ष्य राखेको छ ।हाल उपत्यकामा विभिन्न सङ्क्रमण फैलनसक्ने सम्भावित १० स्थानबाट तीन हजार जनाका स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा एक हजार ६२१ जनाको परीक्षणको नतिजा आएको छ । जसमध्ये तीन जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । जुन ०।१८ प्रतिशत हो । जोखिममा रहेका समुदायबाट उक्त नमूना सङ्कलन गरिएको छ । बैङ्क, वित्तीय संस्थान, बजार–पसल, स्वास्थ्यकर्मी र घना बस्तीबाट नमूना सङ्कलन गरिएको छ ।
भावनासँग प्रेम गर्ने सुहाना
कस्ती छन् किम जोङ उनकी श्रीमती : आखिर किन बहिनी मात्र लिएर हिँड्छन् किम !
कोरोनालाई जित्ने ९ देश , जहाँ अब कोरोनाको बिरामी एउटा पनि छैन, गरे कोरानामुक्त देश घोषणा !
“हजुरको आफ्नै त्यस्तो बिजोक छ, मैले कसरी पैसा लिनु ?”